Ianaro ny fomba hampitomboana ny vola miditra amin'ny alàlan'ny fampiasana ny hery lehibe ateraky ny boaty fitadiavana kely | Martech Zone
Ny fikarohana no fiteny iraisan'ny rehetra. Ary ny boaty fikarohana dia vavahadin'ny valin-teninao rehetra. Ao an-trano manonofinofy momba ny fandriana vaovao ho an'ny tranonao? Google seza fatoriana tsara indrindra ho an'ny trano kely. Eo am-piasana manandrana manampy ny mpanjifa hahatakatra ny safidin'izy ireo? Tadiavo ao amin'ny intranet-nao ny vidiny farany sy ny antsipiriany farany zaraina amin'izy ireo.
Amin'ny fampisehoana tampony, ny fikarohana sy ny fizahana dia mampisondrotra ny tsipika ambony sy ambany. Mividy bebe kokoa ny mpanjifa ary mijanona ho mahatoky, ary ny mpiasa mahomby kokoa ary mifikitra hatrany rehefa mahita izay tadiaviny ary mahazo tolo-kevitra manokana.
Manomboka amin'ny traikefa niomerika ka hatramin'ny sehatry ny asa nomerika manerantany, Lucidworks manampy ny orinasa manangana vahaolana fikarohana sy fikarohana mahomby hahafinaritra ny mpampiasa sy hampitombo ny sandan'ny data azo zahana.
Ny fikarohana dia lavitra noho ny boaty iray fotsiny. Izy io dia afaka mamorona na mamaky ny traikefa nomerika iray manontolo.
Ireto misy ohatra roa momba ny fomba Fitambarana, Sehatra fikarohana Powered Lucidworks AI, manampy ny mpivarotra eran-tany hampitombo ny vola miditra, ny banky ambony manangana fifandraisana mpanjifa lalindalina kokoa, ny orinasan-tsolika lehibe indrindra eto an-tany manome fahefana ny fanapahan-kevitra tohanan'ny data, ary ny tahirinkevitra momba ny fitsaboana dia manohana diagnostika haingana sy fikarakarana ara-pitsaboana.
Ahoana ny fomba namindran'ny Lenovo ny fikarohana mba hanokafana loharano hampitomboana ny fiovam-po sy ny fifandraisana
Rehefa nandray ny ekipa mpikaroka momba ny Lenovo.com ny Global Search Lead Marc Desormeau dia sendra fanontaniana iray izy:
Fa maninona no tsy manatsara araka izay tadiavintsika azy ny fikarohana?
Mikasa ny hisolo ny vahaolana fitadiavana FAST amin'ny sehatra iray izay afaka manohana ny fanovana nomerika feno, Lenovo nitodika tany amin'i Gartner sy Forrester mba hahazoana tratra vetivety. Notoroana i Lucidworks Fusion. Ny haitao misy loharano malalaka an'ny Fusion dia misy fitaovana ivelan'ny-boaty izay mamela ny fahalalahana sy ny fanaingoana ka ny valin'ny fikarohana dia azo ampifanarahana manokana amin'ny tsipika vokatra, toerana, fiteny, mpampiasa ary maro hafa. Zava-dehibe izany ho an'ny marika manerantany toa an'i Lenovo miaraka amin'ireo vokatra manodidina ny orinasa B2C, SMB, ary B2B ary manompo ny mpanjifa amin'ny tsena 180 miteny amin'ny fiteny 60 samy hafa.
Manomboka mahatakatra ny olona fa misy angon-drakitra tena izy eto izay sarobidy ary azontsika ampiasaina izany hanolorana ny mpanjifantsika traikefa tsara kokoa.
Marc Desourmeau, Lead Search Global, Lenovo
Taorian'ny fampiharana ny Fusion, dia nahita fandraisana anjaran'ny fidiram-bola isan-taona i Lenovo tamin'ny alàlan'ny fitomboan'ny fikarohana 95%. Ao amin'ny tranokalan'ny mpanjifa an'i Lenovo, ny tahan'ny clickthrough sy ny tahan'ny fiakarana dia nampiseho fanatsarana lehibe, manaporofo fa mahita haingana kokoa ny atiny tadiavin'izy ireo ny mpanjifa. Ary koa, amin'ny fampifangaroana ny mpampiasa famantarana—Mba misy ny tsindry, ampidiro amin'ny sarety sy fividianana— miaraka amin'ny fianarana milina, ny ekipa mikaroka dia afaka nanamboatra ny laharan'ny valim-pikarohana ho an'ny tahirin-kevitra marobe ao amin'ny tranokalan'izy ireo. Ny fahamendrehana, refesina isaky ny impiry ny tsindry an'ny mpanjifa ny vokatra voalohany raha oharina amin'ny valiny manaraka, dia nihatsara mihoatra ny 55% tao anatin'ny volana vitsivitsy monja taorian'ny nanombohany ny fusion Fusion.
Ny mpiasa ao amin'ny Top Bank dia mampiasa tolo-kevitra ho an'ny tena manokana hampitomboana ny lanjan'ireo mpanjifa
Ny iray amin'ireo banky amerikana ambony dia sahirana manampy ireo mpanolotsaina ara-bola hamantatra haingana ireo torohevitra sy vokatra mifandraika amin'ny mpanjifa. Ny banky dia nahitana fikarohana momba ny fampiasam-bola maherin'ny 250 novokarina ary nakarina isan'andro tao amin'ilay rafitra, fa ny ankamaroan'ny mpanolotsaina dia manam-potoana hahafantarana ny tenany amin'ny antontan-taratasy 15-20 fotsiny. Tsy afaka nivezivezy tamin'ny alàlan'ny fitaovana rehetra izy ireo, nanoratra azy ireo ary namantatra hoe iza no nifandraisany indrindra tamin'ireo mpanjifany 2,000. Ny fotoana nilaina hamantarana ireo vahaolana dia nidika ny famokarana ambany kokoa ary ny fotoana tsy nahitanao fifandraisana amin'ny mpanjifa.
Ny fikarohana dia ivon'ny asa-tanan'ny mpanolotsaina ara-bola ary ampiasaina amin'ny fifindrana mankany amin'ny asa hafa fampiasam-bola, varotra na serivisy.
Fantatr'i Lucidworks fa ilaina ny mpanolotsaina mba hamaha haingana ny fifandraisana misy eo amin'ny fahalianan'ny mpanjifa sy ny fomba fitondran-tenany. Miaraka amin'ny Fusion, ny orinasa dia afaka namorona lisitry ny fahitana azo tsapaintanana sy ny analytics mba hanampiana azy ireo hamantatra haingana ilay Hetsika manaraka tsara indrindra ho an'ny mpanjifa tsirairay. Ireo mpanolotsaina ara-bola dia afaka manao laharam-pahamehana ny zavatra tokony vidin'ny mpanjifa na hivarotra fampiasam-bola manokana mifototra amin'ny fironana sy ny lamina ao amin'ny kaonty, manome ilay karazana traikefa "fantatrao-amiko" antenain'ny mpanjifa. "Next Best Action" dia mandeha ho azy ny fandraisana fanapahan-kevitra marefo amin'ny fotoana ary manatsara ny fahombiazan'ny mpanolotsaina ka mivarotra serivisy mpanjifa kendrena bebe kokoa ao anatin'ny fotoana fohy. Izany rehetra izany dia niteraka fifandraisana lalina tamin'ireo mpanjifa ary nampitombo ny vola miditra.
Sintomy ny Free Ebook: Manova ny traikefa ananan'ny mpanolotsaina ara-bola miaraka amin'i AI
Fijerena solika goavambe sy solika avy amin'ny data efa ho 150 taona
Iray amin'ireo orinasan-tsolika lehibe indrindra eto an-tany dia nanana fampahalalana izay niverina 150 taona niely nanerana ny taratasy, ny tahiry, ny fisoratana anarana, ny mailaka, ny kapila manokana ary nizara, erak'izao tontolo izao. Satria tsy hitan'ny mpiasa ny angon-drakitra ilain'izy ireo dia nanomboka nopotsiriny izany, ary nanjary nitombo hatramin'ny 250 tapitrisa ireo antontan-taratasy. Ny fahitana ny vaovao farany, dia sarotra ny kinova marina amin'ireo fitaovana 28 napetraky ny orinasa. Ny tahirin-kevitra sasany dia tsy naseho index ary ny loharano hafa dia mihoatra ny terabyte lehibe, izay sarotra loatra ny manondro azy. Na dia namerina valiny tsara aza ireo fitaovana dia tsy natoky ny olona ny valiny — ary raha tsy hitanao izay tadiavinao dia tsy misy ilana azy ireo angona.
Tonga i Lucidworks niaraka tamin'ny lahasa famoronana fanandramana angon-drakitra maharesy lahatra amin'ny alàlan'ny fampiasana analytics mba hampifandraisana ireo silo fampahalalana, hamoronana katalaogy mailaka momba ny toe-javatra sy ny maha-zava-dehibe azy, ary ahafahan'ny mpampiasa mamoaka fahalalana ara-barotra mifandraika amin'ny tahiry manan-tantara rehetra. Fusion dia afaka nandinika antontan-taratasy an-tapitrisany tamin'ny alàlan'ny fanodinana fiteny voajanahary (NLP) amin'ny teny anglisy, frantsay, alemanina, rosiana, mamela ny fahazoana vaovao manerana ny loharanom-baovao, ary manamora ny fahitana vaovao amin'ny alàlan'ny fikafika mifototra amin'ny tombontsoa manokana voatahin'ny mpampiasa. Miaraka amin'ny fanaparitahana azy, ny ekipa mpikaroka dia afaka manararaotra ny haren'ny angon-drakitra vokarina, ary maka haingana ireo vaovao marim-pototra rehefa ilain'izy ireo izany, izay mitarika amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra sy fitehirizana vola.
Ny vavahady fikarohana misy herin'ny AI dia manampy ny dokotera hamantatra sy hikarakara ny marary
AllMedx nohazavaina Google ho an'ny dokotera. Fantatr'izy ireo fa sosotra amin'ny motera fikarohana mahazatra toa an'i Google sy Bing ny dokotera satria matetika ny valiny dia voadona amin'ny atiny tsy azo atokisana izay natao ho an'ny mpanjifa sy ny marary. Nahatsapa i AllMedx fa ny dokotera sy ny mpitsabo hafa dia afaka mahazo tombony amin'ny fitaovam-pitadiavana izay namoaka ny ao anatiny fotsiny avy amin'ny lahatsoratra nosafidian'ny MD, diary ara-pitsaboana misy vokany be, ary loharanom-pahasalamana mifantina sy fanta-daza hafa. Ny tanjona dia ny fanafoanana ireo sombin-javatra tsy misy ilàna azy sy mpanjifa izay tsy misy dikany firy amin'ireo mpitsabo mitady valiny amin'ny fanontaniana klinika sy fitsaboana tsy misy dikany.
Taorian'ny nananganan'ny AllMedx vatan-kazo voarafitra tsara mifototra amin'ny fahaizana manokana momba ny fitsaboana, dia nila nanamora ny fitadiavana izy ireo. Amin'ny alàlan'ny algorithman ML an'ny Fusion, ny valin'ny fikarohana dia namboarina ho an'ny mpampiasa tsirairay. Mamela ny fitsapana ny mpampiasa AllMedx mankany amin'ny fantsom-pikarohana fitadiavana lenta ary manatsara ny traikefa fikarohana an'ny mpampiasa. Miaraka amin'ny Fusion, AllMedx dia afaka manohana am-pitokisana ireo mpampiasa dokotera amin'ny alàlan'ny fanomezana fidirana amina antontan-taratasy 12 tapitrisa voamarina amin'ny alàlan'ny fikarohana ataon'ny AI. Miorina amin'ny fanehoan-kevitr'ireo mpampiasa dokotera, ny ekipa AllMedx dia matoky fa hampitombo ny fidirana amin'ny fampahalalana mpitsikera sy pitsaboana izay manampy amin'ny fanatsarana ny fikarakarana marary.
Mianara bebe kokoa momba ny fomba hanovan'ny AI ho fanafody tsara kokoa
Jereo hoe inona no dikan'ny fanovana nomerika mahery anao
Ny tampon'isan'ireo traikefa niomerika nanerana ny tsipika rehetra dia ny fanokana-tena, na ny fahaizana maminavina ny tanjon'ny mpampiasa tsirairay. Eto no ilaoanao farany ny lalàna mifehy tanana an'arivony ary tsy ny fanaovana an-tsokosoko ihany no hampiasanao fianarana milina, famantarana, ary Ny fanodinana fiteny voajanahary. Miaraka, ireo haitao rehetra ireo dia manome hery ny fikarohanao ho mihoatra ny boaty kely eo an-joron'ny efijery.
Ary ny boaty fikarohana dia tsy ny ampahany amin'ny traikefa niomerika efa masaka ho an'ny fanovana — hatraiza ny fahaizan'ny chatbot anao? Iray amin'ireo fanatsarana sarobidy indrindra sy manerantany azonao atao amin'ny orinasanao ny fandefasana vahaolana chatbot marani-tsaina. Lucidworks Valiny maranitra dia enhancer chatbot izay mihatra amin'ny rehetra Ny fanodinana fiteny voajanahary, fianarana milina, ary fanangonana famantarana voajanahary amin'ny Fusion amin'ny traikefa chatbot. Ny fanompoana tena tsaratsara kokoa miaraka amin'ny chatbot mahay dia manome ny mpampiasa serivisy haingam-pandeha ary manafaka ireo maso sy mpanampy fanampiana hifantoka amin'ny tranga sarotra sy mihoapampana. Afa-po ny mpanjifa ary ny mpiasa dia mirotsaka amin'ny asany.
Na boaty fikarohana tsy misy na mpanampy virtoaly marani-tsaina kokoa, Lucidworks Fusion dia manome fahaiza-manao ambaratonga orinasa hamolavolana, hampivelatra ary hametrahana fampiharana fikarohana mahira-tsaina amin'ny ambaratonga rehetra, ary eken'ny orinasa mpikaroka teknolojia mahaleo tena Forrester sy Gartner. Ireo orinasa manerana ny Global 2000 dia miantehitra amin'i Lucidworks isan'andro mba hananany hery amin'ny rindranasa fikarohana tadiavin'ny mpanjifa sy ny orinasa. Liana amin'ny famaritana ny fomba ahafahanao mahazo bebe kokoa amin'ny fikarohanao?
Mifandraisa amin'i Lucidworks anio
Tags: fikarohana mandeha amin'ny herin'ny aiallmedxbankychatbottraikefa amin'ny dataFanovàna dizitalyForresterfikarohana anatinyLenovolanja mandritra ny androm-piainanalucidworksFiaraha-miasa Lucidworksfianarana milinaNy fanodinana fiteny voajanaharyhetsika manaraka tsara indrindranlpfamantaranavaliny mahira-tsainafanohananafikarohana kelyvirtoaly mpanampy